Soomaaliya Iyo Midowga Yurub Oo Kala Saxiixday Heshiis ku Kacaya €100 Milyan Oo Euro (Daawo) – Idil News
Soomaaliya Iyo Midowga Yurub Oo Kala Saxiixday Heshiis ku Kacaya €100 Milyan Oo Euro (Daawo)
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Xukuumadda Soomaaliya iyo Midawga Yurub ayaa maanta kala saxiixsay €100 milyan (Boqol milyan oo Yuuro) oo midowga Yurub si toos ah ugu taageerayo miisaaniyadda dawladda.
Heshiiskan oo lagu saxiixay munaasabad lagu qabtay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayuu goob joog ka ahaa Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa uu dhigayaa in midowga yurub ay bangiga dhexe ee dalka ku shubaan €100 milyan.
Wasiirka Qorshaynta, maal-gashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo Agaasimaha Guud ee Guddiga Midowga Yurub u qaabishan iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah Mr. Stefano Manservisi ayaa si wadajir ah u saxiixay heshiiska.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay fursad wayn oo horseedi karta in deynta laga cafiyo dalka iyo in loo gudbo isku filnaansho dhaqaale, waxa uuna u mahad celiyay shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo dawladda ku taageeray kasbashada aaminaadda beesha caalamka iyo hay’adaha lacagaha adduunka.
“Maanta waa maalin wayn, munaasabaddaan waxa ay ka tarjumaysaa soo laabashada aaminaada u dhexsaysa dawladda iyo dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah, aaminaadda iyo kalsooniada ay shacabka Soomaaliyeed dawladoodda ku qabaan iyo aaminaadda bulshada caalamku ay ku qabto hay’adaha dalwladda”ayuu yiri Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Midowga Yurub oo go’aan ku gaaray in dawladda si toos ah loo taageero sababo la xariira in ay la timid hufnaan iyo dib-u-habayn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa dhawaan ansixiyay bixinta €100 mliyan (Boqol Milyan oo Yuuro) taas oo si toos ah loogu shubayo qasnadda dawladda.